हामी संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ गरेरै छोड्छौं : मुख्यमन्त्री, सुदूरपश्चिम प्रदेश – Health Post Nepal
२०७६ चैत २५ गते १९:३८
कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश उच्च संवेदनशील क्षेत्र हो। भारतबाट आएका दुई, दुबईबाट आएका एक र स्थानीय एकमा गरी अहिलेसम्म यो प्रदेशमा मात्रै चारजना संक्रमित भेटिइसकेका छन्।
कोरोना महामारीबाट प्रदेशलाई जोगाउन र भारतबाट आएका नागरिकको खोजी गरी स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारको तयारी लगायतका विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग हेल्थपोस्ट नेपालले गरेको कुराकानी :
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमित देखिएपछि प्रदेश सरकारले कस्तो रणनीतिका साथ काम गरिरहेको छ?
म अहिले पनि छलफलमै छु। प्रदेश सुरक्षा समन्वय समितिको अनौपचारिक छलफलमा कोरोनाको जोखिमबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउन गर्नुपर्ने आवश्यक पहलका सन्दर्भमा कुरा भयो। त्यसैगरी, नयाँ वर्ष आउँदैछ। नयाँ वर्षलाई मुलुकभरि विशेष उल्लासका साथ मनाउने गरिन्छ। तर, यसपटक नयाँ वर्षमा कुनै पनि कार्यक्रम हुने छैनन्। कोरोना भाइरसको संत्रासका बीच नयाँ वर्षमा आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गरेर नागरिकको सुरक्षा गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व बन्छ। त्यसैले उच्च सुरक्षा र सतर्कता अपनाएर हामीले कोरोनाको जोखिमलाई हटाउनु छ। हरेक दृष्टिकोणबाट नागरिकको सुरक्षा गर्न प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध छ। मैले उच्च सतर्कता र तत्परताका साथ काम गरिरहेको छु। सबै मन्त्रालयको विषय नेतृत्वमा कामकारबाही अघि बढिरहेका छन्।
अनि कोरोनाको जोखिम नियन्त्रणका लागि के–के गरिरहनु भएको छ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै स्वास्थ्यसेवा प्रवाह हो। स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा काम गर्न केही समस्या भएकै हो। यसको समाधानको काम थालिसकेका छौं। अर्कोतर्फ, भारतसँगको खुला सीमाना र अहिले काम गरेर घर फर्किनेहरूको संख्या उच्च रहेकाले पनि सावधानी अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। नयाँ वर्षलाई उत्सवका रूपमा मान्ने भएकाले घर फर्किनेहरूको ताँती लाग्छ। विशेषगरी चाडपर्व नमनाउने र अनावश्यक भीडभाड रोक्न निर्देशन दिइसकिएको छ। र, भारतबाट आएका सबै नागरिकलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण छ–छैन भन्ने प्रमाणित गर्न र सबै नागरिकको सुरक्षा गर्नका लागि हामी आवश्यक तयारी गरिरहेका छौं।
यसका लागि सामग्री पनि त चाहियो नि?
व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई) तथा कोरोना भाइरस परीक्षण मेसिनहरू र त्योसँग सम्बन्धित अन्य सामग्री खरिदका लागि सूचना आह्वान गरिएको छ। टेण्डर सेलेक्सनको प्रक्रिया हुँदैछ। ‘बीड’ भइसकेको छ। संघीय सरकारलाई पनि हामीले अनुरोध गरिसकेका छौं। तीन ठाउँ ल्याव स्थापना गरेर ¥यापिड टेस्ट गर्नुपर्छ। सुदूरपश्चिममा हाम्रो देशको सबैभन्दा बढी चार जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। र, दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको हुनाले स्थिति असामान्य बन्न सक्छ। यही विषयलाई दृष्टिगत गरेर हामीले संघीय सरकारसँग समन्वय अघि बढाएका हौँ। जो–जो भारतबाट आउनु भएको छ। जुन–जुन स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ, उहाँहरूको रगतको नमूना छनोट गरी कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न नदिने, चेन ब्रेक गर्ने भन्ने विषयमा संघीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको छ।
नेपाल र भारतका क्वारेन्टाइनमा कत्ति जतिलाई राखिएको छ? उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीको प्रबन्ध कसरी गर्नु भएको छ?
नेपालतर्फ कैलाली, कञ्चनपुर र बैतडीमा क्वारेन्टाइन स्थापना गरेर भारतबाट फर्र्किएकाहरूलाई राखिएको छ। त्यहाँ २ सय ५० भन्दा धेरै नागरिकलाई राखिएको छ। भारततर्फ पनि नेपालीहरूलाई राखिएको छ। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका क्वारेन्टाइनमा २ हजारभन्दा धेरै नेपालीहरू सुरक्षित र उच्च स्वास्थ्य सतर्कताका साथ रहेका जानकारी हामीले पाएका छौं। संघीय सरकारसँगको समन्वयमा क्वारेन्टाइनमा रहेका नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा खानेबस्ने लगायतका सम्पूर्ण प्रबन्ध गरिएको छ। यदि कोरोनाबाट संक्रमित भएमा उपचार गराउने विषयमा पनि हामीले आवश्यक समन्वय गरिरहेका छौं। नोकरी गर्नेहरूलाई सम्बन्धित उद्योगहरूले नै व्यवस्थापन गरेको छ।
लकडाउनका कारण मजदूर र निम्न आय भएका नागरिकका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ?
लकडाउनका कारण मजदूर र विपन्न वर्गका नागरिकलाई संकट हुनसक्छ। त्यसलाई दृष्टिगत गरी एकैसाथ राहतका कार्यक्रमहरू अघि बढाइएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि अनुदानको रकम पठाइसकिएको छ। र, केही दिनभित्रै प्रत्येक विपन्न र मजदूर वर्गका नागरिकलाई पुग्नेगरी निश्चित रकम पठाइदिने तयारी भइरहेको छ। त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड र निर्देशिका बनाएर रकम पठाउने व्यवस्था गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ।
कार्यविधि निर्माण गर्न कति समय लाग्छ? र कस्तो व्यवस्था गरिने छ?
भोलि मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दैछ। त्यही बैठकबाट पास गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरिँदैछ।
चार जनालाई कोरोनाको संक्रमण भइसकेपछि उनीहरूको उपचारको प्रबन्ध कसरी गरिएको छ? र, उनीहरूको अवस्थाबारे तपाई जानकारी लिनु भएको छ?
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत चारै जनाको स्वास्थ्य अवस्थाको विषयमा जानकारी लिइरहेको छु। उहाँहरूको उपचार जारी छ। स्वास्थ्य सुधारोन्मुख छ। साथै अन्यको सुरक्षाका लागि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई बोलाएर न्यूनिकरण र व्यवस्थापनका विषयमा नियमित अपडेट लिइरहनु भएको छ। शान्ति सुरक्षा र सीमानाको विषयमा तथा अब दिनुपर्ने समग्र राहत प्याकेजको विषयमा जानकारी लिने र आवश्यक निर्देशन दिने कार्य भइरहेको छ। कार्यविधि र निर्देशिकालाई सहज बनाउने विषयमा पनि पहल भइरहेको छ।